Haawaasni Oromoo Magaala Haaguusan(Noorweey) Haala Amma Oromiyaa keesa jiruurratti Marii’atan – YEROOBLOG
Haawaasni Oromoo Magaala Haaguusan(Noorweey) Haala Amma Oromiyaa keesa jiruurratti Marii’atan
Yerooblog	News & Views, Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	 January 10, 2016 1 Minute
Hawaasni Oromoo biyya Noorweey, magaala Haagusan (Hagusend) jiraataan guyyaa kaleessaa (09/01/2016) akkaata itti maatii ijoolleen mootummaa Itoophiyaatiin jalaa ajjeefamnii gargaaruun danda’amu irratti mari’ataniiru. Haala qabatamaa Oromiyaa keessa jiru irratti gadi fageenyaan waliin dubbataniiru.
Oromoon magaala Haagusan ajjeeechaa, hidhaa fi daraara baratootaa fi uummata Oromoorratti mootummaan Itoophiyaa Adda Bilisa Baasaa Tigraayiin durfamu raawwachuu jiru cimsanii balaalefataniiru. Namoota haga yoona ajjeesamaniif gaddaa isaanii ibsaniiru.
Hawaasni Haagsun Oromoon biyyaa alaa jiraatu (diaspora) sochiin gochaa jiru baay’ee gaarii ta’uu ibsanii, yeroo kamiyyuu taanaan baratoota Oromoo bukkee dhaabachuun dirqama Oromummaati jedhaniiru. Kana malees, dhaabbilleen siyaasaa maqaa Oromootiin socho’aa jiran walitti dhufanii uummaata Oromoo mirgasaaf qabsaa’a jiru tumsuu qabu jedhaniiru. Qabsoon Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaan yeroon itti barbaachis amma ta’usaa dubbataniiru.
Suraa:Haawaasa Oromoo Maagaala Haaguusan (Noorweey) Mormii Maastar Pilaanii Finfinnee Oromiyaa keessatti deemsifaa jiru deeggarsa qaban yeroo ibsan
Kana malees, Oromia Media Network (OMN), ijaafi gurra Oromoo waanta’eef maalaqaan gargaaruun barbaachisaa akka ta’e irratti waligalaniiru. Akka isaan jedhanitti, OMN, yoo dhaabbate qabsoon Oromoos duukaa dhaabbata waan ta’eef, Oromoonni biyya keessaa odeeffanoo gahaa qabsoon Oromoo irra jiru akka argatuuf OMN jabeessuun baay’ee barbaachisaa dha.
Guyyuma kana Hawaasni Oromoo Haagusan maatii ijoollleen jalaa ajjeefamaniif maalaqa walitti guuraniiru.
Previous Post International Media Cover Oromo Protests
Next Post MY EXPRIENCES AT ETHIOPIAN INVESTIGATION CENTER:MAIKELAWI
One thought on “Haawaasni Oromoo Magaala Haaguusan(Noorweey) Haala Amma Oromiyaa keesa jiruurratti Marii’atan”